တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် GGS ကုမ္ပဏီမှ (၃)ဦးတို့ကို အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် အရေးယူ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် GGS ကုမ္ပဏီမှ (၃)ဦးတို့ကို အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် အရေးယူ
Writen by Tachileik News Agency 7:58:00 PM -0Comments
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်အား အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖြင့် စုံစမ်းပြီးနောက် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ GGS ကုမ္ပဏီမှ MD ဦးသိန်းထွေး၊ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မြတ် နှင့် ဦးသူရအုံတို့အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ (၁၀)ရက်နေ့တွင် အမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅ အရလည်းကောင်း၊ GGS ကုမ္ပဏီမှ MD ဦးသိန်းထွေး၊ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မြတ် နှင့် ဦးသူရအုံတို့အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅/၆၃ အရ လည်းကောင်း သီးခြား ပြစ်မှုများအတွက် သီးခြားစွဲချက်များဖြင့် အမှု(၄)မှုခွဲ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ထားဝယ်မြို့၊ မြို့မရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်အားတိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၄)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၆)ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် ထားဝယ်မြို့များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ဗဟိုမဏ္ဍပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ချုံနွယ် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်း အပြင်ဘက် ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ထိုက်သင့်သည့် တန်ဖိုးမပေးဘဲ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို့ တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့မရှိဘဲ ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကို ခွင့်ပြုငွေ ကျပ်သိန်း (၄၀၀၀) ဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်၏ ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို့ တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်စေခြင်းသည် တံစိုးလက်ဆောင်ကို အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဒေသန္တရပေါက်ဈေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ် တွက်ချက်မှုအရ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများ နစ်နာဆုံးရှုံးရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု သိရသည်။
ယင်းအပြင် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်သည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ လမ်းဦးစီးဌာနသို့ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ငွေကျပ် (၁.၉) ဘီလီယံခန့် ထုတ်ယူရန် အခွင့်အရေး ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလခန့်တွင် တိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးအား သူမ၏ ခင်ပွန်း ဦးထွန်းမင်းက ဦးမြင့်ဟို အမည်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ထားဝယ်မြို့ ဆေးရုံလမ်းနှင့် ဂေါ်သဇင် လမ်းထောင့်ရှိ အိမ်အမှတ် (၁၀၆၈) နှင့် (၁၀၇၀) မြေကွက် နှစ်ကွက်ကို အုတ်ခြံစည်းရိုး ကာရံပေးရန် စေခိုင်းခဲ့ရာ ငွေကျပ်သိန်း (၁၄၀) ကျော် ကုန်ကျခဲ့ပြီး သူမအား စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါမှ ယင်းငွေကို ပြန်လည်ပေးချေကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ထိုက်သင့်သည့်တန်ဖိုး ပေးချေခြင်းမရှိဘဲ အုတ်ခြံစည်းရိုး ကာရံပေးစေခြင်းဖြင့် တံစိုးလက်ဆောင်အဖြစ် ရယူခဲ့ကြောင်း ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်သည် ၎င်း၏ မိသားစု ပိုင်သည့် သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ မြို့မရပ်၊ မြိတ်-ထားဝယ် ကားလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၆)ရှိ နှစ်ထပ်နေအိမ်နှင့် ဝိုင်းမြေကို ကာလတန်ဖိုး ကျပ် (၃၂၀)သိန်းကျော် ခန့်သာ တန်ဖိုးရှိသော်လည်း ကျပ်သိန်း(၂၀၀၀)ဖြင့် GGS ကုမ္ပဏီသို့ ရောင်းချခဲ့ကာ GGS ကုမ္ပဏီအား သရက်ချောင်း ငါးလေလံဈေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ထားဝယ်မြို့ ခြင်းလုံးရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပုလောမြို့ မြို့တော်ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထားဝယ်နှင့် မြိတ်တွင် ခြောက်ခန်းတွဲ လေးထပ် တန်ဖိုးနည်း အငှားအိမ်ရာ(၄)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း၊ နေပြည်တော်တွင် တနင်္သာရီတိုင်း ဧည့်ရိပ်သာနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ် ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် အခွင့်အရေးပေးခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်၏နေအိမ်ကို ဝယ်ယူသူ ဦးသူရအုံသည် GGS ကုမ္ပဏီအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်အတူ GGS ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သော ဦးသိန်းထွေး၊ ဦးအောင်မြတ်တို့သည် အိမ်နှင့်မြေကို ကာလ တန်ဖိုးထက် (၆)ဆခန့် ပိုသည့်တန်ဖိုးဖြင့် ဈေးပိုပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အကျိုးအမြတ် ရရှိမည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု ကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့က ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ နေရာတွင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးနှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ နေရာတွင် GGS ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ဦးသိန်းထွေးတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကာ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကြီးကြပ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ဆေးသည့်အချိန်အထိ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဖိုး ကျပ်သန်း (၈၀၀၀) ကျော်ကို ပေးချေရန် တာဝန်ရှိသည့် GGS ကုမ္ပဏီဘက်မှ ပေးချေရန် ပျက်ကွက်နေသဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ စိုက်ထုတ်ကျခံခဲ့ရမှုများကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုရှိသဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် GGS ကုမ္ပဏီမှ ဦးသိန်းထွေးနှင့် ဦးအောင်မြတ်တို့သည် အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ငြိစွန်းကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု သိရသည်။
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ GGS ကုမ်ပဏီမှ (၃)ဦးတို့ကို အဂတိလိုကျစားမှုဖွငျ့ အရေးယူ
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လဲ့လဲ့မျောအား အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ကျောမရှငျက စုံစမျးရေးအဖှဲ့ဖွငျ့ စုံစမျးပွီးနောကျ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့အတူ GGS ကုမ်ပဏီမှ MD ဦးသိနျးထှေး၊ ဒါရိုကျတာ ဦးအောငျမွတျ နှငျ့ ဦးသူရအုံတို့အား အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒဖွေငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မတျလ (၁၀)ရကျနတှေ့ငျ အမှုဖှငျ့လိုကျကွောငျး သိရသညျ။
စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့၏ စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြမြားအရ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လဲ့လဲ့မျောအား အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၅၅ အရလညျးကောငျး၊ GGS ကုမ်ပဏီမှ MD ဦးသိနျးထှေး၊ ဒါရိုကျတာ ဦးအောငျမွတျ နှငျ့ ဦးသူရအုံတို့အား အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၅၅/၆၃ အရ လညျးကောငျး သီးခွား ပွဈမှုမြားအတှကျ သီးခွားစှဲခကျြမြားဖွငျ့ အမှု(၄)မှုခှဲ၍ အရေးယူဆောငျရှကျရနျ ထားဝယျမွို့၊ မွို့မရဲစခနျး၌ အမှုဖှငျ့လိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဝနျကွီးခြုပျအားတိုငျကွားစာမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ကျောမရှငျက စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့စညျး၍ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလ (၄)ရကျနမှေ့ မတျလ (၆)ရကျနအေ့ထိ နပွေညျတျော၊ ရနျကုနျနှငျ့ ထားဝယျမွို့မြားတှငျ စုံစမျးစဈဆေးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
၂၀၁၆ ခုနှဈ ဧပွီလတှငျ မဟာသွင်ျကနျပှဲတျော ဗဟိုမဏ်ဍပျ တညျဆောကျရေးလုပျငနျး၊ ၂၀၁၆ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလတှငျ ထားဝယျတက်ကသိုလျဝငျးအတှငျး ခြုံနှယျ ရှငျးလငျးခွငျးလုပျငနျး၊ ထားဝယျလယောဉျကှငျး အပွငျဘကျ ခြုံနှယျရှငျးလငျးခွငျး လုပျငနျးမြားအတှကျ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့က ထိုကျသငျ့သညျ့ တနျဖိုးမပေးဘဲ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို့ တာဝနျပေး ဆောငျရှကျစခေဲ့ပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၁၅)ရကျနတှေ့ငျ တငျဒါချေါယူခွငျး၊ အစိုးရအဖှဲ့ အစညျးအဝေး၌ အတညျပွုဆုံးဖွတျခွငျးတို့မရှိဘဲ ထားဝယျလယောဉျကှငျးအတှငျး ခြုံနှယျရှငျးလငျးခွငျး လုပျငနျးတဈခုတညျးကို ခှငျ့ပွုငှေ ကပျြသိနျး (၄၀၀၀) ဖွငျ့ ဝနျကွီးခြုပျ၏ ရာထူးတာဝနျကို အလှဲသုံးစားပွု၍ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို့ တိုကျရိုကျခှငျ့ပွုဆောငျရှကျစခွေငျးသညျ တံစိုးလကျဆောငျကို အဖှဲ့အစညျးအတှကျ ရယူခွငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီးမြား၏ ဒသေန်တရပေါကျဈေးမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျ တှကျခကျြမှုအရ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာငှမြေား နဈနာဆုံးရှုံးရကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျဟု သိရသညျ။
ယငျးအပွငျ ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လဲ့လဲ့မျောသညျ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးမြား၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၏ ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျခွငျး မရှိဘဲ လမျးဦးစီးဌာနသို့ တဈလုံးတဈခဲတညျး ငှကေပျြ (၁.၉) ဘီလီယံခနျ့ ထုတျယူရနျ အခှငျ့အရေး ပေးအပျခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလခနျ့တှငျ တိုငျးဒသေကွီး လမျးဦးစီးဌာနမှ ညှနျကွားရေးမှူးအား သူမ၏ ခငျပှနျး ဦးထှနျးမငျးက ဦးမွငျ့ဟို အမညျဖွငျ့ ဝယျယူထားသော ထားဝယျမွို့ ဆေးရုံလမျးနှငျ့ ဂျေါသဇငျ လမျးထောငျ့ရှိ အိမျအမှတျ (၁၀၆၈) နှငျ့ (၁၀၇၀) မွကှေကျ နှဈကှကျကို အုတျခွံစညျးရိုး ကာရံပေးရနျ စခေိုငျးခဲ့ရာ ငှကေပျြသိနျး (၁၄၀) ကြျော ကုနျကခြဲ့ပွီး သူမအား စုံစမျးစဈဆေးသညျ့အခါမှ ယငျးငှကေို ပွနျလညျပေးခကြွေောငျး စဈဆေးပျေါပေါကျသဖွငျ့ ထိုကျသငျ့သညျ့တနျဖိုး ပေးခခြွေငျးမရှိဘဲ အုတျခွံစညျးရိုး ကာရံပေးစခွေငျးဖွငျ့ တံစိုးလကျဆောငျအဖွဈ ရယူခဲ့ကွောငျး ထပျမံပျေါပေါကျခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လဲ့လဲ့မျောသညျ ၎င်းငျး၏ မိသားစု ပိုငျသညျ့ သရကျခြောငျးမွို့နယျ၊ မွို့မရပျ၊ မွိတျ-ထားဝယျ ကားလမျး၊ အိမျအမှတျ (၆)ရှိ နှဈထပျနအေိမျနှငျ့ ဝိုငျးမွကေို ကာလတနျဖိုး ကပျြ (၃၂၀)သိနျးကြျော ခနျ့သာ တနျဖိုးရှိသျောလညျး ကပျြသိနျး(၂၀၀၀)ဖွငျ့ GGS ကုမ်ပဏီသို့ ရောငျးခခြဲ့ကာ GGS ကုမ်ပဏီအား သရကျခြောငျး ငါးလလေံဈေးတညျဆောကျခွငျး၊ ထားဝယျခရိုငျ လြှပျစဈဓါတျအား ထုတျလုပျဖွနျ့ဖွူးခွငျး၊ ထားဝယျမွို့ ခွငျးလုံးရုံ တညျဆောကျခွငျး၊ ပုလောမွို့ မွို့တျောခနျးမ တညျဆောကျခွငျး၊ ထားဝယျနှငျ့ မွိတျတှငျ ခွောကျခနျးတှဲ လေးထပျ တနျဖိုးနညျး အငှားအိမျရာ(၄)လုံး တညျဆောကျခွငျး၊ နပွေညျတျောတှငျ တနင်ျသာရီတိုငျး ဧညျ့ရိပျသာနှငျ့ ဝနျထမျးအိမျရာ ဆောကျလုပျ ခွငျး လုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျခှငျ့ပွုခွငျးဖွငျ့ အခှငျ့အရေးပေးခဲ့ကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျဟု သတငျးထုတျပွနျသညျ။
ဝနျကွီးခြုပျ၏နအေိမျကို ဝယျယူသူ ဦးသူရအုံသညျ GGS ကုမ်ပဏီအထှထှေမေနျနဂြောနှငျ့အတူ GGS ကုမ်ပဏီမှ တာဝနျရှိသူမြားဖွဈသော ဦးသိနျးထှေး၊ ဦးအောငျမွတျတို့သညျ အိမျနှငျ့မွကေို ကာလ တနျဖိုးထကျ (၆)ဆခနျ့ ပိုသညျ့တနျဖိုးဖွငျ့ ဈေးပိုပေး၍ ဝယျယူခဲ့ပွီး အကြိုးအမွတျ ရရှိမညျ့ လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ကွကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျဟု ကျောမရှငျက သတငျးထုတျပွသညျ။
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ထားဝယျခရိုငျအတှငျး လြှပျစဈဓါတျအား ထုတျလုပျ ရောငျးခခြွငျးဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျကို ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၆)ရကျနကေ့ ခြုပျဆိုခဲ့ပွီး လုပျကိုငျခှငျ့ပွုသူ နရောတှငျ တိုငျးအစိုးရအဖှဲ့ ကိုယျစား အတှငျးရေးမှူးနှငျ့ လုပျကိုငျခှငျ့ရသူ နရောတှငျ GGS ကုမ်ပဏီကိုယျစား ဦးသိနျးထှေးတို့ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွကာ စာခြုပျပါ စညျးကမျးခကျြမြားအတိုငျး အကောငျအထညျဖျောရေး ကွီးကွပျရနျ ပကျြကှကျခွငျး၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၁)ရကျနမှေ့စ၍ စဈဆေးသညျ့အခြိနျအထိ သဘာဝဓါတျငှဖေို့း ကပျြသနျး (၈၀၀၀) ကြျောကို ပေးခရြေနျ တာဝနျရှိသညျ့ GGS ကုမ်ပဏီဘကျမှ ပေးခရြေနျ ပကျြကှကျနသေဖွငျ့ လြှပျစဈနှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနမှ စိုကျထုတျကခြံခဲ့ရမှုမြားကို စဈဆေးတှရှေိ့ရသဖွငျ့ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာငှမြေား ထိခိုကျနဈနာဆုံးရှုံးမှုရှိသဖွငျ့ အဆိုပါလုပျငနျးစဉျတှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ့ တိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ GGS ကုမ်ပဏီမှ ဦးသိနျးထှေးနှငျ့ ဦးအောငျမွတျတို့သညျ အဂတိလိုကျစားမှုဖွငျ့ ငွိစှနျးကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျဟု သိရသညျ။